Power Moto Co.Ltd မှ အလုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျးမြား | MyJobs
/ Power Moto Co.Ltd မှ အလုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျးမြား | MyJobs
အကွောငျး Power Moto Co.Ltd
Power Moto Company isasole distributor in Myanmar which is proudly distributing Austria Brand KTM Sportmotorcycles and Indian Brand Bajaj RE Tricycles. We have started our business in August, 2015 and nowadays, we have been operating head offices and branch offices in Yangon, Bago, Mandalay and other 22 cities.
ကျွန်တော်တို့ Power Moto Company သည် မြန်မာပြည် ဥရောပ Austria Brand ဖြစ်သည့် KTM Sportmotorcycles များ၊ အိန္ဒိယ အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည့် Bajaj RE သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များကို မြန်မာပြည်အတွက် တစ်ဦးတည်းသော တရားဝင် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဂုဏ်ယူစွာ ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချလျက်ရှိပါတယ်။
မိတ်ဆွေအနေနဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များနဲ့ပါတ်သတ်ပြီးအထူးစိတ်ပါဝင်စားသည်ဖြစ်စေ၊သုံးဘီးဆိုင်ကယ်အမျိုးအစားများနှင့် ပါတ်သတ်၍စိတ်ပါဝင်စားသည်ဖြစ်စေ၊မိမိကျွမ်းကျင်သောကဏ္ဍမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းကျွန်တော်တို့ကုမÜဏီနဲ့ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Bajaj RE သုံးဘီးဆိုင်ကယ်ကဏ္ဍမှာတော့ မြန်မာပြည်\_ မိသားစုများရဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှစ၍ မြို့ပြအငှားယာဉ်အနေနဲ့